बाइडेनले गरे पत्नीका नाममा ट्वीट, लेखे ‘म तिमीलाई माया गर्छु जिली' ! - नेपालबहस
बाइडेनले गरे पत्नीका नाममा ट्वीट, लेखे ‘म तिमीलाई माया गर्छु जिली’ !
| २२:३३:०० मा प्रकाशित
७ माघ, एजेन्सी । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले सपथ लिन अब केही समय बाँकी छ । नेपाली समयअनुसार १० बजेर ४५ मिनेट जाँदा उनी अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति बन्नेछन् । सपथका लागि बाइडेन र नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस क्यापिटल हिलस्थित संसद् भवनमा आइसकेका छन् ।
बाइडेनसँगै उनकी पत्नी जिल बाइडेन पनि सपथ समारोहमा सहभागी हुन संसद् भवन आइसकेकी छिन् । संसद् भवन पुगेर बाइडेनले जिलका नाममा ट्वीट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘म तिमीलाई माया गर्छु जिली र यो यात्रामा तिम्रो साथभन्दा म धेरै आभारी हुन सक्दिंन ।’
यस ट्वीटसँगै उनले जीलको हात समातेर हिँडिंरहेको छोटो भिडियो पनि पोस्ट गरेका छन् । बाइडेनले सपथ लिएसँगै जिल अमेरिकीकी फस्र्ट लेडी बन्नेछिन् । बाइडेनको सपथ समारोहमा सरिक हुन पूर्व राष्ट्रपतिहरु बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्ल्यु बुस, बाराक ओबामासहितका विशिष्ट अतिथिहरु पनि क्याटिपल हिल आइपुगिसकेका छन् ।
अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पुर्याउने प्रस्तावमा सहमति जुटेन १ दिन पहिले
इजिप्ट सरकारले रुसद्वारा निर्मित खोप प्रयोगका लागि अनुमति दियो २ दिन पहिले
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न २ दिन पहिले
एनसीसी बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा खड्का नियुक्त १ हप्ता पहिले
बिश्व चर्चित ट्युनमा बनेको गीत ‘दुरी मजबुरी’ अब बजारमा २ हप्ता पहिले
भारतमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै पूर्व प्रम खनाल २ हप्ता पहिले
हिजो दिनभरी राजधानी हल्लाउने त्यो समाचार १ वर्ष पहिले
ओली सरकार सबैभन्दा भ्रष्ट २ वर्ष पहिले